बँदेलको पेटमा भेटियो ६ करोड भन्दा बढी मुल्यवान बस्तु ! « The News Nepal
बँदेलको पेटमा भेटियो ६ करोड भन्दा बढी मुल्यवान बस्तु !
एजेन्सी। चीनको जु कन्ट्री नजिकैको एक गाउँका किसान एक झट्कामा करोडपति बनेका छन् । यी किसानले एक जंगली बँदेलको शिकार गरेका थिए । उनले यसलाई काट्दा बँदेलको पेटबाट एउटा ढुंगाजस्तो चीज निस्कियो । यो विचित्रको चीजलाई उनले संभालेर राखे ।
एक दिन उनी त्यो चीजलाई लिएर सांघाइ गएका थिए । त्यतिबेला उनलाई थाहा भयो यो त संसारकै बहुमूल्य चीजमध्येको एक हो ।